Tag: android | Martech Zone
Linq: Bixiyahaaga Isgaarsiinta Goobta dhow (NFC) Kaararka Ganacsiga
Jimco, Juun 9, 2021 Jimco, Juun 9, 2021 Douglas Karr
Haddii aad akhristayaal ka ahayd boggeyga muddo dheer, waad ogtahay sida aan ugu faraxsanahay noocyada kala duwan ee kaararka ganacsiga. Waxaan haystay kaararka ogeysiiska ka dib, kaararka laba jibbaaran, kaararka birta ah, kaararka laalamiyey… Aad ayaan ugu raaxeeyaa Dabcan, xirida iyo awood la'aanta safarka, ma jirin baahi badan oo loo qabo kaararka ganacsiga. Hadda safarkaasi wuu furmayaa, in kastoo, waxaan go'aansaday inay ahayd waqtigii cusboonaysiinta kaarkayga oo aan heli lahaa
Cunsurrada Ugu Sareeya Ka Qayb Qaadashada Ogeysiiska Riixista ee Wax Ku oolka ah ee Mobilada
Way dhammaadeen waqtiyadii ay soosaarayeen waxyaalo waaweyn ay ku filnaayeen. Kooxaha tifaftirka hadda waa inay ka fekeraan waxtarkooda qaybinta, iyo ka-qaybgalka dhagaystayaasha ayaa cinwaanno ka dhigaya. Sidee barnaamij warbaahineed u heli karaa (oo u hayn karaa) adeegsadayaashiisa? Sidee cabirradaadu u barbardhigaan celceliska warshadaha? Pushwoosh wuxuu falanqeeyay ololeyaal ogeysiis riix ah oo ka kooban 104 warbaahin firfircoon wuxuuna diyaar u yahay inuu ku siiyo jawaabo. Maxay Yihiin Barnaamijyada Warbaahinta Aad Ugu Hawl Gala? Laga soo bilaabo wixii aan ku aragnay Pushwoosh,
Haddii aad tagtay wadada qorista iyo daabacaadda ebook, waad ogtahay inaad ku jahwareersan tahay noocyada faylka ee 'EPUB', beddelaadyada, qaabeynta iyo qaybinta ma aha kuwa qalbi jilicsan. Waxaa jira tiro ka mid ah xalalka ebook ee halkaa ka jira kuwaas oo kaa caawin doona habka aadna u hesho buuggaaga buugaagta Google Play Books, Kindle iyo qalab kale. Buugaagta Ebook-gu waa hab wanaagsan oo shirkadaha ay ugu dejiyaan awooddooda booskooda iyo a
Qaylo: Madal Horumarineed ee App-ka Mobilada ugu Fudud
Tani waa mid ka mid ah mowduucyada aan runtii u qabo jacayl adag markay tahay macaamiishayda. Barnaamijyada moobiillada ayaa laga yaabaa inay ka mid yihiin xeeladahaas oo sii wataya kharashaadka ugu sarreeya iyo soo-celinta ugu yar ee maal-gashiga marka si liidata loo sameeyo. Laakiin markii sifiican loo dhammeeyo, waxay leedahay korsasho iyo hawlgelin waalli ah oo waalli ah. Maalin kasta qiyaastii 100 barnaamij ayaa loo soo diraa suuqa, kuwaas oo boqolkiiba 35 ay saameyn ku yeeshaan suuqa.
Uscreen: Fiidiyow Baahi iyo Baahiyaha Barnaamijka Abka TV-ga
Maaddaama noocyada iyo khubaradu ay raadinayaan inay dhiirrigeliyaan oo ay lacag ka helaan khubarada ay ku dhex leeyihiin gudaha, dhowr fursadood ayaa ah inay ka furtaan wadiiqooyinka barnaamijyada telefishanka dusha sare (OTT) ama inay si dhab ah lacag u helaan oo ay u dhisaan manhajyo, qorshooyinka casharrada, iyo fiidiyowyada ku saleysan rukunka. . Saadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee lagama maarmaanka u ah bilaabida barnaamijyada telefishanka ee gaarka loo leeyahay, isku-darka liisaska, albaabbada lacag-bixinta, iyo fiidyowyada la duubo maahan wax fudud oo shirkad loo fidiyo. Shaki kuma jiro, sida ugu dhakhsaha badan ee aad u bilowdo… app ama shuruudaha lacag bixinta